​Deg Deg: Prof Jawaari oo loo doortay Guddoomiyaha Barlamanka Somalia
Prof Jawaari oo loo doortay Guddoomiyaha Barlamanka Somalia
MUQDISHU, Somalia- Waxaa hadda lasoo afmeeray tirinta codadka Xildhibaanada Barlamanka Somalia ay ugu codeeyeen murashaxiinta u taagan Afhayeen golaha shacbiga dalka.
Doorashada Guddoonka oo ay ku loolamayaan 4 murashax, ayaa tan iyo bilowgii waxaa ku horeeyay Xildhibaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo Cabdirashiid Maxamed Xidig.
Afhayeenkii hore ee Barlamanka Somalia, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ku guulaystay jagaadaas isagoo helay 141 cod, wuxuuna sidaas ku noqday Guddoomiye maadama uu helay codad ka badan kuwii Guddigu ku xireen qofka wareegga kowaad guulaysanaya oo ah 135 cod.
Waxaa kusoo xigay Cabdirashiid Xidig oo isna helay 92 cod, halka murashaxiinta kala ah; Geesey 17, Idiris Cabdi Dhaqtar 2 cd heleen.
Tirinta codadka markay dhammaatay, waxaa isbadalay jawiga hoolka, waxaana durba bilowday buuq iyo sawaxan taasoo ay sameeyeen Xildhibaanada.
Waxay ku qaylinayeen oraahyo kala duwan oo ay ku jirto, Jawaari ayaa na hogaamin doona Afarta Sano ee soo socota.
Arrintan ayaa dadka qaybtiis horay u saadaaliyeen inay dhici karto.
Siyaasigan 72 sano jirka ah kuma cusba siyaasadda, oo wuxuu afartii sano ee la soo dhaafay hayay xilka maanat dib loogu doortay
Intii ka horreysayna wuxuu u badnaa shaqooyin uu la la qabtay qaramada midoobay, jaamacad ku taalla Norway oo uu wax ka dhigayay iyo guddoomiye uu ka noqday guddiyo qaran oo qaabilsanaa dastuurka.
Wuxuu ka soo jeedaa oo ay isku hayb yihiin guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xassan Sheekh Aadan oo isagu loo arko inuu ka mid yahay musharrixiinta u tartameyso xilka madaxtinnimada.
Doorashada Aqalka hoose oo Garowe lagusoo afmeeray
Puntland 13.12.2016. 10:40
GAROWE, Puntland- Xalay ayaa la doortay Xildhibaankii ugu dambeeyay 37 Mudane oo Puntland ka heshay golaha shacbiga Somaliyeed oo la filayo in 15 bishan lagu dhaariyo caasumadda Somalia.
Kursigan oo xalay goor dambe la doortay, waxaana iska lahaa Dhulbahante ga ...
​Puntland: Doorashada xubnaha Aqalka Sare oo lasoo gaba gabeeyay [Sawirro]
Puntland 20.10.2016. 20:49
​Murashaxiin u gudbay wareega 2aad iyo tirinta codadka Guddoomiye ku-xigeenka 2aad oo socota
Soomaliya 12.01.2017. 14:09
​Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia oo ka socoto Muqdishu
Soomaliya 11.01.2017. 12:00
​Puntland: Xildhibaanada labada Aqal oo la sagootiyay [Sawirro]
Puntland 13.12.2016. 21:05